‘हामी लालपूर्जा कहिले पाउँछौ सरकार ? – Mission
‘हामी लालपूर्जा कहिले पाउँछौ सरकार ?
बैजनाथ गाउँपालिकाका वडा नम्बर ६ का अठ्ठाईस घरका सुकुम्बासीहरुले अझै पनि लालपूर्जा पाएका छैनन् । स्थानीय देखि केन्द्रिय नेताहरुले लालपूर्जा वितरण गर्ने प्रमुख एजेन्डा बनाएपनि अझै सुकुम्बासीहरुले लालपूर्जा पाउन सकेका छैनन् । यस्तै विगत २०३८ सालदेखि बसोबास गर्दैै आएका अठ्ठाईस घरका सुकुम्बासीहरुका समस्यै समस्या रहेको गंगा सुनारले बताइन् ।
उनका अनुसार बाढी पहिरोका कारण बिस्थापित भएका समुदायहरु तत्कालिन समयमा सुकुम्वासीका रुपमा बसाई सराई गरि आएका छन् । ‘लालपूर्जा पाउनका लागि वडादेखि प्रदेशसम्म ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छौँ’ उनले भनीन्, ‘चुनावमा लालपूर्जाको वितरण गर्ने विश्वासका साथ चुनाव जिताउँछौँ तर लालपूर्जा भने पाउँदैनौं’ लालपूर्जा नहँदा सरकारी सेवाबाट समेत बञ्चित भएको सुनारले बताइन् ।
उनका अनुसार २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको समयमा १ सय ७ घरपरिवारले कालो लालपूर्जा पाएका थियौं । त्यतिबेलामा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग मार्फत १० कठठा जग्गाको कालो लालपूर्जा प्राप्त गरेको उनको भनाई थियो । तर बस्ति विकास कम्पनी ताराताल बर्दियामा प्रति कठठा ११००० हजार जम्मा गर्नुपर्नेमा आर्थिक अभावका कारण रकम जम्मा गर्न नसक्दा हातमा पुर्जा भएपनि हालसम्म पनि जमिन उपयोग गर्न पाएका छैनौ कहिले पाउँछौ ? उनले प्रश्न गरिन ।
यस्तै अर्को सुकुम्बासी मदन बहादुर विश्वकर्माले आफु शिक्षाबाट बञ्चित भएको बताए । उनका अनुसार कालो लालपूर्जा छ त्ययसलाई देखाएर ऋण पनि लिन मिल्दैन के गर्ने ? पैसा अभावका कारण पढ्न पाएको छैन । आफ्नो घर बाहेक अरु केही छैन त्यो पनि खरले छोएको छ, त्यो पनि हावाहुरी र पानी आएको बेलामा पानी चुहिन्छ, सुकुम्बासी भएर बाच्न निकै गाह्रो रहेछ, उनी निकै भावुक हुँदै भने ।
यस्तै अर्का सुकुम्बासी तुले सुनारले आर्थिक अभावका कारणले आफ्नो हातमा कालो लालपूर्जा छ तर जमिन नभएको दुःख व्यक्त गरे । ‘४० वर्षदेखि लालपूर्जाको लागि दौडिरहेका छौं तर अहिलेसम्म पनि लालपूर्जा पाएको छैन’ ‘लालपूर्जा कस्तो हुन्छ देख्न नपाई मरिने भो’ उनले भने ।
यस्तै बैजनाथ गाउँपालिका सूचना अधिकारी तप्त आचार्यले सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि गाउँपालिका निरन्तर लागिपरेको बताए । गाउँपालिकाले अहिले सुकुम्बासीहरुको लालपूर्जा पाउनका लागि फार्म भरेको र सोही अनुसार सुकुम्बासी आयोगले निरन्तर काम गरिरहेको आचार्यको भनाई थियो ।
भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग बाँके जिल्लाका संयोजक शान्ती ढकालले सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनका अनुसार अहिले बैजनाथ गाउँपालिकाले फर्म भरे अनुसार जग्गा नापजाँच गरेर पूर्ण विवरण जिल्लाको सुकुम्बासी आयोगको कार्यालयमा बुझाएपछि मात्र हामीले लालपूर्जाको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउने बताइन् । अहिले कोहलपुर र खजुराले फर्म अनुसारको जग्गाहरु नाप्न सुरु गरेको र बैजनाथ गाउँपालिकाले सो काम सुुरु नगरेको उनकोे भनाई थियो ।
लकडाउनमा सुकुम्बासी समस्यामा
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकिन सरकारले लगाएको लकडाउनमा बैजनाथका सुकुम्बासीलाई खाने समस्या भएको छ । दैनिक मजदुरी गरेर परिवारको जीविकोपार्जन गर्दै आएका सुकुम्वासी बस्तीमा लकडाउनको बेला छाक टार्न समस्या भएको हो ।
बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर ६ अठ्ठाईस घरका सुकुम्बासी जंग बहादुर कामीले घरमा बस्ने गरी भएको बन्दले खान नै समस्या भएको बताए । ‘दुई सन्तानसहित ४ जनाको परिवार रहेको उनले भने, ‘खान चाहिने रासन कोसँग लिने भनेर पनि अन्योल छ । उनले भारतमाबाट कमाएको पैसाले घर परिवारको छाक टार्ने गरे पनि अब खान घरमा केही पनि नरहेको बताए । सापटी पनि कसैले नदिने भएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ । त्यहाँका अठ्ठाईस घरका सुकुम्बासीहरुको समस्या रहेको उनीहरुको भनाई थियो ।
प्रकाशित मितिः शनिबार, असार ५, २०७८ 7:51:45 AM |
Tagged अठ्ठाईस घरका सुकुम्बासीको प्रश्न...
Prevढुंगा, गिटी निकासी नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
Nextबाँकेमा ९३ सक्रिय संक्रमित, अहिलेसम्म जिल्लाका ३१० जनाको मृत्यु